Fampandrosoana ny eny ifotony : Nametraka paikady vaovao ny fitondram-panjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaFampandrosoana ny eny ifotony : Nametraka paikady vaovao ny fitondram-panjakana
12/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notanterahina tany Morondava, renivohitry ny Faritra Menabe, ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenen’ny mponina 2017 na ny JMP. Tonga nanotrona ny lanonam-pankalazana tany an-toerana ny minisitry ny Mponina, Onitiana Realy, sy ny minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Jean-Anicet Andriamosarisoa, ary ny solontenan’ny FNUAP, Constant-Serge Bounda, izay mpiara-miombon’antoka teknika sy ara-bola.
Nivoitra tamin’ity fankalazana ny JMP 2017 tany Morondava ity kosa ny fanomezana tosika manokana ireo mpamboly sy mpanjono ary ireo fikambanana isan-tokony. Tafiditra indrindra amin’izany ny fanomezana fitaovana, toy ny angady sy “sarcleuses” an-jatony maro, kalesy sy angadin’omby maro, ho an’ireo mpamboly. Milina fanjaraina marobe kosa ho an’ny fikambanam-behivavy ary harato sy ireo kojakoja miaraka aminy kosa ho an’ireo mpanjono. Natolotra omaly, nanoloana ireo vahoaka tonga marobe nankalaza ny JMP 2017 kosa ireo fitaovana rehetra voalaza etsy ambony ireo.
Mazava izao fa manana paikady vaovao hanampiana mivantana an’ireo tantsaha ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Tsy inona izany fa io fanomezana mivantana ny fanofanana, miampy fitaovana, miampy fanohanana ara-bola mivantana sy maharitra, tahaka ity nataon’ny ministeran’ny Mponina tany Morondava ity. Izany rehetra dia ho fampandrosoana maharitra ny eny ifotony.
Toy ny mahazatra, amin’ny fanomezana sy fizarana fitaovana ho fampandrosoana ny asa mahavelona sy mampidi-bola (AGR) amin’ireo faritra maro manerana ny Nosy, mizara fiofanana maimaim-poana ara-teknika sy fitantanana tsotra ho an’ny mponina hatrany ny minsiteran’ny mponina (MPPSPF). Saika tonga nanaraka izany fiofanana izany avokoa ireo fikambanan’ny mpamboly miisa 20 sy mpanjono miisa valo avy amin’ny distrika sy kaominina maro ka ireo teknisianin’ny MPPSPF miaraka amin’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Fambolena sy Fiompiana (MPAE) ary ny minisiteran’ny Jono (MRHP) no nizara ny traikefany tamin’ireo mpiofana.
Nambaran’ny minisitra Onitiana Realy tamin’ny lahateny nataony nandritra ny lanonam-pankalazana kosa fa mila mandray sy mankatoa ny fampiharana ny fiainana ao an-tokantrano na fianam-pianakaviana ireo mpanao lalàna ary koa mila manaja tanteraka ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao Malagasy ho amin’ny dingana rehetra amin’ny fampandrosoana.
Marihina fa manaraka ny lohahevitra iraisam-pirenena “Fandrindrana Fianam-pianakaviana: Tsirairay mandray andraikitra, Firenena mandroso” ny JMP 2017 eto Madagasikara.
Ankoatra izay, tsy nitaza-potsiny ny fankalazana ny JMP 2017 ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina, fa nanolotra omby miisa efatra ho “nofon-kena mitam-pihavanana” ho an’ireo mponina.
Dia mitohy ny asa fanakorontanana saim-bahoaka notanterahin’ireo eo anivon’ ny solombavambahoaka 73, izay nametraka fitoriana fialan’ireo solombavambahoaka namany, izay nolazain’izy ireo fa nivadika tamin’ny antoko nahalany azy. Lohalaharana tamin’io fitoriana io ny TIM sy ny ...Tohiny
Fitsaram-bahoaka tany vangaindrano : RAVAN’NY ZANDARY NY BARAZY TAMIN’NY RN12
Filaharana anaty bileta tokana : Anio ny antsapaka